ဂ်ာမနီနိုင္ငံမွာ က်င္းပေနတဲ့ Oldenburg ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ က ဒါ႐ိုက္တာ ဏႀကီး႐ိုက္ကူးတဲ့ What happened to the wolf? ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား နဲ႔ မင္းသမီး အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္က အေကာင္းဆုံးအမ်ိဳးသမီး သ႐ုပ္ေဆာင္ဆု
ဆု ရရွိသြားပါတယ္။ စစ္ေကာင္စီဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ထားလို႔ အင္းစိန္ေထာင္မွာ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ မင္းသမီး အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ဒီ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကိုစီစဥ္တဲ့ ႐ုပ္ရွပ္ထုတ္လုပ္သူ Torsten Neumann အပါအဝင္ ပြဲေတာ္စီစဥ္သူေတြက အဂၤလိပ္လို Eaindra Kyaw Zin ဆိုတဲ့ စာတန္းနဲ႔ အက်ႌေတြကို ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲေန႔က ဝတ္ဆင္ထားခဲ့ၾကတာပါ။
ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားကိုေတာ့ ဖမ္းဆီးခံထားရလို႔ မင္းသမီးအိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ၿပီး ဆုလက္ခံယူႏိုင္ျခင္းေတာ့ မရွိတဲ့အျပင္ ဒီဇာတ္ကားကို ႐ိုက္ကူးသူ ဒါ႐ိုက္တာ ဏႀကီး၊ ၿပီးေတာ့ သူ႔ဇနီးလည္းျဖစ္ ဒီ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွာ ဇာတ္ပို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္လည္းျဖစ္တဲ့ မင္းသမီး ပိုင္ၿဖိဳးသုနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ျမင့္ျမတ္တို႔လည္း စစ္ေကာင္စီက တပ္မေတာ္ၿပိဳကြဲေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္မႈ ၅၀၅ (က)နဲ႔ စြဲဆိုထားတာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကပါတယ္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက က်င္းပတဲ့ Oldenburg ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ဟာ ဒီႏွစ္ လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရဲ႕ နံပါတ္ ၁ Indie ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာလိဝုဒ္လို ေငြေတြပုံေအာ႐ိုက္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးေတြမဟုတ္ဘဲ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူေတြ၊ ႐ုပ္ရွင္ကားဖန္တီးသူေတြ ေငြနည္းနည္းနဲ႔ ဖန္တီးတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားေတြကို ျပသယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတာပါ။
ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ သရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင် ဂျာမန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆုရရှိ
ဂျာမနီ နိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ Oldenburg နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ က ဒါရိုက်တာ ဏကြီးရိုက်ကူးတဲ့ What happened to the wolf? မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား နဲ့ မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင်က အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆု Seymour Cassel ဆု ရရှိသွားပါတယ်။ စစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားလို့ အင်းစိန်ထောင်မှာ ထောင်သွင်းအကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုစီစဉ်တဲ့ ရုပ်ရှပ်ထုတ်လုပ်သူ Torsten Neumann အပါအဝင် ပွဲတော်စီစဉ်သူတွေက အင်္ဂလိပ်လို Eaindra Kyaw Zin ဆိုတဲ့ စာတန်းနဲ့ အင်္ကျီတွေကို ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲနေ့က ဝတ်ဆင်ထားခဲ့ကြတာပါ။
ဆုပေးပွဲအခန်းအနားကိုတော့ ဖမ်းဆီးခံထားရလို့ မင်းသမီးအိန္ဒြာကျော်ဇင် ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီး ဆုလက်ခံယူနိုင်ခြင်းတော့ မရှိတဲ့အပြင် ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးသူ ဒါရိုက်တာ ဏကြီး၊ ပြီးတော့ သူ့ဇနီးလည်းဖြစ် ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ သရုပ်ဆောင် အောင်မြင့်မြတ်တို့လည်း စစ်ကောင်စီက တပ်မတော်ပြိုကွဲအောင် လှုံ့ဆော်မှု ၅၀၅ (က)နဲ့ စွဲဆိုထားတာကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်ကတည်းက ကျင်းပတဲ့ Oldenburg ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာ ဒီနှစ် လူကိုယ်တိုင် တက်ရောက်နိုင်တဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ နံပါတ် ၁ Indie ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟောလိဝုဒ်လို ငွေတွေပုံအောရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမဟုတ်ဘဲ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတွေ၊ ရုပ်ရှင်ကားဖန်တီးသူတွေ ငွေနည်းနည်းနဲ့ ဖန်တီးတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို ပြသယှဉ်ပြိုင်ကြတာပါ။